Seho iraisam-pirenena: andiany faha-29 ny “Festival international Madajazzcar” | NewsMada
Seho iraisam-pirenena: andiany faha-29 ny “Festival international Madajazzcar”
Nanomboka tany amin’ny taona 1988, firenena mihoatra ny 25, seho 1 000 eo ho eo ary tarika 300 any ho any no nandray anjara. Vao mainka hampiroborobo ireo isa ireo ny andiany faha-29, hisokatra tsy ho ela.
Folo andro hamirapiratan’ny talenta samihafa ! Ny 3 oktobra ka hatramin’ny 13 oktobra izao, hotanterahina eto Antananarivo ny andiany faha-29 amin’ny « Festival international Madajazzcar ». Hifandimby na hiaraka eny an-tsehatra mandritra ireo andro ireo ny mpanakanto vahiny miisa dimy andrarezin’ny mozika jazz miampy mpanakanto avy eto an-toerana mahatratra 50. Hosokafana ny 3 oktobra, amin’ny 7 ora sy sasany hariva, ao amin’ny Ciné Plaza Ampefiloha, ny fampisehoana rehetra amin’ity andiany faha-29 ity. I Denia Ridley avy any Etazonia arahin’i Roger Zafera sy i Mahefa Ramiandrisoa ary i Lovabil Rakotomalala ; i Datita Rabeson miaraka amin’i Eric Rakotoary sy i Nini Rabarioelina.
Toy ireo andiany teo aloha, ho tazana hatrany ilay endrika fifanakalozana eo amin’ireo andrarezin’ny mozika jazz tahaka an-dry Silo, ry Mendrika Raolomahatratra, ry Elie Ramasindraibe, sns, sy ireo tanora manana talenta miavaka eo amin’ity karazana mozika ity. Toraka izany koa ny avy amin’ireo toerana fampianarana mozika na foibe kolontsaina samihafa (Af Jazz, Jazz club CGM, sns). Mpanakanto manana traikefa amin’ny mozika jazz kosa ry Ablaye Cissoko (Senegal/France), ry Ancient Agents (Afrika Atsimo), i Denia Ridley sy i Philip Maniez, samy avy any Etazonia, ary i Sebastian Studnizky avy any Alemaina.
Notazonina hatrany ihany koa ireo fandaharam-potoana nahafantarana ny “Festival International Madajazzcar” tao anatin’ny taona maro. Anisan’ireny ny « Tremplin », ny kaoferansy isan-karazany, ny “Jazz à l’Université”, sns.